» सर्वाधिक भोट पाउँदै कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ७ मा खड्गबहादुर
सर्वाधिक भोट पाउँदै कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ७ मा खड्गबहादुर
मकवानपुर, १५ माघ । नेपालको पहिलो स्ट्याण्ड अप कमेडी प्रतियोगिता ‘कमेडी च्याम्पियन’ मा वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीमार्फत रोल्पाका खड्गबहादुर पुन मगर उत्कृष्ट ७ मा परेका छन् । गत साता वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीका लागि प्रस्तुति दिएका १० जना प्रतियोगीमध्ये खड्बहादुरले सर्वाधिक भोट पाएका थिए । सर्वाधिक भोट पाएसँगै प्रतियोगितामा उनी पून प्रवेश भएका छन् । उनले वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीको लागि कमेडी च्याम्पियनमा आफ्नो यात्राका बारेमा नै विषयवस्तु बनाएर व्यङ्ग्य गरेका थिए । हेर्नुहोस् भिडियो–
वाईल्ड कार्ड राउण्डबाट नै पर्फमर अफ द राउण्ड घोषित हुँदै ईटहरीका सुमन कोईराला उत्कृष्ट ७ मा वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री भईसकेका छन् । वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीका लागि काठमाडौँकी नम्रता गिरी, आसामका मोहनराज क्षेत्री, शोलुखुम्बुका कैलाश कार्की, नुवाकोटका गणेश राई, दार्जिलिङका अनिल राई, धरानकी सञ्जु कट्वाल, काठमाडौँका क्षितिज केसी, धरानका प्रणेश गौतम, रोल्पाका खड्गबहादुर पुन मगर र ईटहरीका सुमन कोईरालाले प्रस्तुति दिएका थिए ।
उत्कृष्ट ६ मा रहेका अमोग अर्याल यस हप्ताबाट बाहिरिएका छन् । उत्कष्ट ५ मा परेका आदर्शकुमार मिश्रा, विष्णुप्रसाद गौदेल मेक्सम, हिमेश पन्त, सजन श्रेष्ठ, सुमन कार्की र दुई जना वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री भएका प्रतियोगीहरु गरी जम्मा ७ जना प्रतियोगीहरु अहिले प्रतियोगितामा भिडिरहेका छन् । प्रतियोगितामा अग्रज कलाकार सन्तोष पन्त, लोकप्रिय हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेल, निर्देशक प्रदिप भट्टराई र चर्चित नायिका ऋचा शर्माले निर्णायकको भूमिका निभाईरहेका छन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा कमेडी च्याम्पियनको पहिलो विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् यस्तै भिडियोहरुमा लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।